Civil Societies in Zimbabwe Fear Pre-Election Crackdown VOASites by Language
Civil Societies in Zimbabwe Fear Pre-Election Crackdown Print
HARARE— Civil society coalitions in Zimbabwe have raised concerns over the spate of recent police arrests targeting dissenting voices. Non-governmental organizations (NGOs) and analysts fear the crackdown will intensify as the country prepares for elections to end Zimbabwe's coalition government next year. The NGOs and analysts say President Robert Mugabe's ZANU-PF party, which controls the police, wants to do away with organizations that watch for human rights violations.
Pedzisai Ruhanya, a Zimbabwean student working on a doctorate at Britain's University of Westminster, is not surprised the police are targeting the CSU and other Zimbabwean NGOs. “I think these are early warning signs that the government is preparing for an election. Obviously we know that elections in Zimbabwe are always violent, and institutions such as the CSU are those that are credible that record violations, keep credible evidence on the transgressions against citizens’ civil and political liberties," said said Ruhanya. "So it is meant to intimidate and stop these organizations from doing their work.”